နေရာအနှံ ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့် လက်တွေ့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ မေမီကိုကို – Shwe Likes
ဇာတ်လ မ်းတွဲတွေများ စွာနဲ့ ပရိသတ်အ သိအမှတ်ပြု အားပေးချစ်ခ င် မှုတွေကို ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ေ ဆာင်မင်းသ မီးချော မေမီကိုကို ကတော့ ပြည်သူတွေနဲ့ တစ် သားတည်း ရပ်တည်နေသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ မေမီကိုကိုကတော့ လက်ရှိအြေ ခအနေတွေေ ကြာင့် ပြည်သူတွေ ကြုံတွေ့နေကြရတဲ့ အခက်အ ခဲတွေအပြင် သူမကိုယ်တိုင် ခံစားနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်ေ တွကိုလည်း စိတ်မေ ကာင်းစွာ ဖွင့်ဟပြောပြလာပါတယ်..။
လက်တွေ့ ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ မေမီကိုကို
ရှိတဲ့ပစ္စည်းေ လးတွေ ပျက်စီးဆုံး ရှုံးမှာကြောက်လို့ အိမ်ပြန်သယ်နေ ကြရတဲ့ ဈေးသည်တွေရဲ့ ထိတ်လန့်မှုတွေ အပြင် ပြည်သူတွေရဲ့ စိုးရိ မ်သောကတွေကို မေမီကိုကိုက ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ပေါက်ကွဲမှုတွေနဲ့ လတ်တလောအခြေအေ နတွေအမျိုး မျိုးကြောင့် သူမကိုယ်တိုင်လည်း ညဘက်ေ တွမှာ အိပ်မပျော်ဘဲ လန့်လန့်နိုးနေရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ ကို ရင်ဖွင့်ပြောပြထားပါသေးတယ်..။
“အော် ဈေးသည်တွေ သနားပါတယ်…. မနေ့ညက စစ်ကားတွေ ဈေးကိုဝိုင်းထား တာ တွေ့တော့ ပစ္စည်းေ လးတွေ အိမ်ကိုပြန်သယ်ေ နကြရရှာတယ် (ကိုယ့်အမျိုးတွေအပါအဝင်) မြို့လေးက သေးပါတယ်ဆိုနေမှ…. ဗုံးခွဲလိုက် လက်နက်ကြီးနဲ့ ပစ်လိုက်နဲ့…. လေယာဉ်တွေနဲ့ ဖြတ်ပြလိုက်နဲ့…. တနေ့တနေ့ ဗုံးသံကြောင့်ပဲ လန့်လန့်နိုး လာရတယ်….” ဆိုပြီး မေမီကိုကိုက ရေးသားပြာပြထားတာပါ..။
အဲ့ဒီ ပို့စ်အောက်မှာတော့ ပရိသတ်ေ တွကလည်း အခြေအနေဆိုးတွေကို ကိုယ်တိုင် တွေ့ကြုံခံ စားနေရရှာတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ သူမရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကို ပြောပြထားတဲ့ မေမီကိုကို ကို အားပေးစကားတွေ ပြောထားကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။
ဇာတ္လ မ္းတြဲေတြမ်ား စြာနဲ႕ ပရိသတ္အ သိအမွတ္ျပဳ အားေပးခ်စ္ခ င္ မႈေတြကို ရရွိထားတဲ့ သ႐ုပ္ေ ဆာင္မင္းသ မီးေခ်ာ ေမမီကိုကို ကေတာ့ ျပည္သူေတြနဲ႕ တစ္ သားတည္း ရပ္တည္ေနသူပဲ ျဖစ္ပါတယ္..။ ေမမီကိုကိုကေတာ့ လက္ရွိအေျ ခအေနေတြေ ၾကာင့္ ျပည္သူေတြ ႀကဳံေတြ႕ေနၾကရတဲ့ အခက္အ ခဲေတြအျပင္ သူမကိုယ္တိုင္ ခံစားေနရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေ တြကိုလည္း စိတ္မေ ကာင္းစြာ ဖြင့္ဟေျပာျပလာပါတယ္..။
ရွိတဲ့ပစၥည္းေ လးေတြ ပ်က္စီးဆုံး ရႈံးမွာေၾကာက္လို႔ အိမ္ျပန္သယ္ေန ၾကရတဲ့ ေဈးသည္ေတြရဲ႕ ထိတ္လန႔္မႈေတြ အျပင္ ျပည္သူေတြရဲ႕ စိုးရိ မ္ေသာကေတြကို ေမမီကိုကိုက ေျပာျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္..။ ​ေပါက္ကြဲမႈေတြနဲ႕ လတ္တေလာအေျခအေ နေတြအမ်ိဳး မ်ိဳးေၾကာင့္ သူမကိုယ္တိုင္လည္း ညဘက္ေ တြမွာ အိပ္မေပ်ာ္ဘဲ လန႔္လန႔္နိုးေနရတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ေတြ ကို ရင္ဖြင့္ေျပာျပထားပါေသးတယ္..။
“ေအာ္ ေဈးသည္ေတြ သနားပါတယ္…. မေန႕ညက စစ္ကားေတြ ေဈးကိုဝိုင္းထား တာ ေတြ႕ေတာ့ ပစၥည္းေ လးေတြ အိမ္ကိုျပန္သယ္ေ နၾကရရွာတယ္ (ကိုယ့္အမ်ိဳးေတြအပါအဝင္) ၿမိဳ႕ေလးက ေသးပါတယ္ဆိုေနမွ…. ဗုံးခြဲလိုက္ လက္နက္ႀကီးနဲ႕ ပစ္လိုက္နဲ႕…. ေလယာဥ္ေတြနဲ႕ ျဖတ္ျပလိုက္နဲ႕…. တေန႕တေန႕ ဗုံးသံေၾကာင့္ပဲ လန႔္လန႔္နိုး လာရတယ္….” ဆိုၿပီး ေမမီကိုကိုက ေရးသားျပာျပထားတာပါ..။
အဲ့ဒီ ပို႔စ္ေအာက္မွာေတာ့ ပရိသတ္ေ တြကလည္း အေျခအေနဆိုးေတြကို ကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ႀကဳံခံ စားေနရရွာတဲ့ ျပည္သူေတြနဲ႕အတူ သူမရဲ႕လက္ရွိအေျခအေနေတြကို ေျပာျပထားတဲ့ ေမမီကိုကို ကို အားေပးစကားေတြ ေျပာထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္..။
Source;May Mi Ko Ko’s Fb Acc
နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ (၇၆)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့မှာ ပန်းသပိတ် ပါဝင်ဆင်နွဲခဲ့ကြတဲ့ အနုပညာရှင်များ